HMN:- Waxaa suuqyada magaalooyinka Puntland-Somalia hoos uga dhacay qiimaha shidaalka, waxa uuna gaaray meeshii ugu hooseysay ee uu gaaro afartii sano ee la soo dhaafay.
Puntland ayaa ka mid ah meelaha sida weyn looga isticmaalo shidaalka noocyadiisa kale duwan.
Bil ka hor suuqyada Puntland fuustada shidaalka naaftada ah waxa uu ka ahaa 200 oo doolar, halka haatan uu marayo 100 doolar oo keliyah.
Hadaba korontada iyo biyaha ayaa ka mid ah waxyaabaha asaasiga u ah nolosha bulshada Soomaaliyeed, iyagoo dhinacyo badan uga faa’ideysta, hase yeeshee sanadihii uga dambeysay dadweynaha ku nool Puntland-Somalia waxa ay ka cabanayeen qiimaha korontada iyo biyaha.
Hay’adda biyaha iyo korontada u qaabilsan Puntland ee PASWEN ayaa sheegtay in qiimo dhimis ku sameysay biyaha iyo korontada, kadib markii qimaha shidaalka adduunka uu hoos u dhacay.
Korontada magaalooyinka Puntland halkii kiilo waad (KW) waxa uu ahaa hal doolar, halka haatan laga dhigay 0.8 doolar.
Biyaha waxa uu ahaa 1.30 doolar, waxaana laga dhigay 1 doolar.
Si kastaba ha ahaatee magaalada Bosaso waxa ay ka mid tahay magaalooyinka sida weyn looga isticmaalo biyaha iyo korontada maadaama ay dhacdo badda cas oo waxaa sanadkii lix bilood oo ka mid ah magaalada ka jra kul daran, xiligaasi oo ah xilga ugu isticmaalka badan biyaha iyo korontada.